बाथ मुटु रोग बारे स्वास्थ्यकर्मि देखि जनसमुदाय सम्म चेतनाको खाँचो – जनस्वास्थ्य खबर
बाथ मुटु रोग बारे स्वास्थ्यकर्मि देखि जनसमुदाय सम्म चेतनाको खाँचो
डा. शम्भु खनाल, ८ वैशाख। ज्ञान र सीप सिकाउन भत्ताको ब्यबस्था गरिएका अनेक कार्यक्रम छन् नेपालमा । सरुवा रोग नियन्त्रणमा ठूलो राशिको बजेट खर्च गरिएको छ बर्षेनी । निशुल्कमा ज्ञान कसले लिन्छ दिन्छ र ! त्यो सम्भव पनि देखिन्न । मलाई भने यो बाथ मुटु रोगले निकै आकर्षित गर्ने गरेको छ । तर यसका लागि कतै ट्रेनिङ र बजेट छुट्याइएको भएपनि आजसम्म थाहा छैन मैले ।
शायद त्यसैको परिणाम होला । अहिले समय समयमा फोन आउँछ बिभिन्न स्वास्थ्यसंस्थाहरुबाट । जे होस्। बालबच्चाहरुमा बिशेष देखिने यो बाथ रोग समयमा नै पत्ता लाग्न थोरै भएपनि टेवा पुगेको छ भन्ने महसुस हुन्छ । जुन पर्याप्त छैन । यो चेतनामूलक जानकारी स्कुलका शिक्षकमा र ८ ,९ कक्षामा पढ्ने बिध्यार्थीमा पनि गराउन सकियो भने अझै प्रभावकारी हुने थियो। जुन मैले गर्न सकिन । बजेट भएन । शायद त्यसैले कसैको साथ पनि भएन । त्यसैले त भन्छु निशुल्कको उपदेशमा जाङर कहाँ देखिन्छ र! सबैको भलो होस् ।